Zvigadzirwa Vagadziri - China Zvigadzirwa fekitori, Vatengesi - Chikamu 3
TIGERNU chikoro chevadzidzi bhegi rine chikamu che laptop
Hunhu hweMhando: Iyo bhegi reUSB rakagadzirwa neplashproof & scratch inomiririra polyester, inogara yakasimba uye eco-inoshamwaridzika. Iyo isina mvura nzira mbiri yekuvhura yakakiya zipi yeiyo huru kamuri inopa mbiri yekudzivirira kuba
Iri bhegi fashoni uye inotonhorera, yakakwana kune hupenyu hwako hwezuva nezuva, rwendo rwebhizinesi, basa, chikoro, musasa, kukwira, pikiniki
Unyanzvi: Iyi diki bhegi ishanduro yakapusa yeT-B3032. Iyo inewo saizi mbiri, saizi imwe ndeye 29 * 14 * 44cm (L * W * H), inokwana laptop kusvika 15.6 ″, imwe saizi iri 31 * 17 * 48cm (L * W * H), inokodzera laptop anosvika 17 ″ .Makamuri makuru maviri nehomwe mbiri dzemberi dzinopa nzvimbo yakakwana yezvese zvaunoda zvezuva nezuva uye chengeta bhegi rako rakashambidzika uye rakarongedzwa.Iyo inovaka mu laptop sleeve yakanyatsokwenenzverwa.Maviri mativi mesh muhomwe yakanaka kune amburera yako uye bhodhoro remvura. Imwe yakavanzwa kumashure anti kuba muhomwe yakakwana kune yako foni uye zvimwe zvakakosha.
Zvimiro: Iri bhegi rine hukuru hukuru, rakaringana chero chinangwa. Bhegi rine rakasimbiswa mubato uye imwe inogadziriswa bhanhire tambo.Ergonomics uye inogadziriswa S-chimiro padding bhanhire tambo inoderedza kunetsekana pamapendekete. bhegi rako riri mutrolley yesutukesi yako zviri nyore.
TIGERNU yakasarudzika dhizaini yakakura inokwana isina mvura laptop laptop
Unyanzvi: Iyo yakasarudzika saga bhegi saizi 35 * 20 * 54cm (L * W * H), inokwana laptop kusvika 19 The .Sleop laptop sleeve yakanyatsokwenenzverwa uye schockproof uye inogadzikiswa.Makamuri makuru maviri uye maviri epamberi mapacheji anopa nzvimbo yakakwana kune ese zvaunoda zvezuva nezuva uye chengetedza bhegi rako rakarongedzwa uye rakarongedzwa.Mapakeji maviri epadivi akanaka kune amburera yako nehombodo yemvura. Imwe yakavanzwa kumashure anti kuba muhomwe yakakwana kune yako foni uye zvimwe zvakakosha.Iyo hombe inokwanisa bhegi, sutuiable yerwendo rurefu uye ibhegi rakarongedzwa zvakanaka rine akawanda-homwe, zviri nyore kuwana izvo zvaunoda.
Chinyorwa: Iyi Laptop bhegi zvinhu zvinopaza-kusatsuka & kukwenya kusagadzikana nylon, yakasimba, inogara kwenguva refu uye eco-inoshamwaridzika. Iyo huru zipi ndeye TIGERNU patent mbiri yakapetwa yakakiyiwa zipi, yakasimba, yakatsetseka kushandisa uye yakachengeteka zvakanyanya kune yako zvinhu.
Zvimiro: Laptop sleeve inochinjika zvinoenderana nezvaunoda.Chikwama chine mubato wakasimbiswa uye tambo imwe yepafudzi.Ergonomics uye inogadziriswa S-chimiro padding bhanhire tambo dzinodzora kushushikana pamapendekete.Iyo inogadziriswa chipfuva tambo inoita kuti bhegi iri rive rakasununguka kupfeka.
Bhegi bhegi ndiTIGERNU classic dhizaini bhegi. Simba rayo hombe uye rakarongeka zvakanaka zvinoita kuti rikodzere chero chinangwa, bhizinesi, kufamba, basa, kukwira musasa, musasa, pikiniki, chikoro, uye zvakare yakanaka chipo chisarudzo kune chero chiitiko.
<< <Yapfuura 123456 Inotevera> >> Peji 3/12